သမိုင်းရဲ့တာရှုမွို့၏အကြီးမားဆုံးလမ်းမကြီးအလုပ်လုပ် Start ကို - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး33 Mersinသမိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးတာရှုမွို့လမ်းမကြီးအလုပ်လုပ် Start ကို
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တာရှုမွို့ခရိုငျ၏သမိုငျးတှငျအကြီးဆုံးလမ်းအကျင့်ကိုကျင့်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တာရှုမွို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကိုလမ်းကြောင်းမြူနီစီပယ်ခင်းကို Maintenance ၌ကြီးသောအရေးပါမှုသော Interconnection နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားရပ်ကွက်မှ Of-Boztepe-BöğrüeğrPirömerlသည်နှင့်ဦးစီးဌာန Repair သမ္မတအသင်းများအားဖြင့်asfaltlanıyဖြစ်ပါတယ်။2နှစ်ပေါင်းပျင်းရိပြည်နယ်လမ်းမကြီး၌ကျန်ကြွင်းလေ့လာမှုမှတဆင့်, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအများပြည်သူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ, အုပ်စုများ2500 ဆီသို့ဦးတည်တထောင်မီတာ 1 ။ အဆိုပါကတ္တရာအလုပ်၏အလွှာမျက်နှာပြင်လျင်မြန်စွာပြီးစီးခဲ့သည်။
ကတ္တရာ, 10 အဘို့အဆင်သင့်လမ်းများအပါအဝင်လုပ်နေဆဲလေ့လာမှုတွေပြီးသည့်အခါ, စုစုပေါင်း 1 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောလမ်း။ အလွှာမျက်နှာပြင်ကတ္တရာလမ်းခင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လမ်းအကြောင်းကိုယခုနှစ်2မတိုင်မီ၏-Boztepe-Böğrüeğrရပ်ကွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားရပ်ကွက်Pirömerlကြောင့်အကြီးစားထုံးကျောက်လုပ်ကွက်မှအန္တရာယ်သမားတွေအားဖြင့်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပစ်၏မြူနီစီပယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၌ကြီးသောအရေးပါမှုရှိပါတယ်။
ထိုသို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှကျေးဇူးတင်စကားအောင်မြင်ထားပြီးလမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိခိုက်သောမြေပေါ်တွင်ရော့ခ်ဖယ်ရှား၏ technique ကို blasting နေဖြင့်ဒေသတွင်း၌နထေိုငျနိုင်ငံသားများ၏လုံခြုံရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အတူလမ်းရဲ့အလယ်၌တည်၏။ လမ်းအလုပ်ခွံ့ပြုသည်ပြီးနောက်အလုပ်၏ကတ္တရာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
မီးသတ်: "ဖုန် မှစ. , ကျနော်တို့ရွှံ့ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်"
Böğrüeğrခရိုင်အကြီးအကဲဿွာန်မီးသတ်, အမှုကြောင့် သာ. ကွီးမွတျအလုပ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်မြို့တော်ဝန် Hemant မျိုးရိုးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖြတ်သန်းနေဖြင့်ဖျော်ဖြေရပ်ကွက်, "ကျနော်တို့ကဒီဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအတွက်မြို့တော်မြူနီစီပယ်Başkanımကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ကျွန်မအရိုအသေပူဇော်လော့။ ဘယ်မှာတိုးချဲ့အလုပ်4နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုရှိခဲ့သည်။ သူ့ကိုငါတို့လမ်းမတွေဖြစ်တဲ့အလုပ်ရှိခဲ့လို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကတ္တရာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကျင့်ပျက်သောကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းခရီးဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွားခဲ့ပါဘူး။ ကားများ, ဥယျာဉ်, စိုက်ပျိုးရေးအမြဲမွမှေုနျ့၌တည်းခိုခဲ့သည်။ အခုတော့ကျေးဇူးတင်စရာမြေမှုန့်ရန်နှင့်ငါတို့လမ်းကို လုပ်. , ကျနော်တို့ရွှံ့ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကပြောသည်သူ 60 နှစ်ပေါင်းBöğrüeğrရပ်ကွက်အတွင်းဆံ Ahmet Koc မှာတော့ "ဤလမ်းလူတွေမှာသော်လည်းကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ်များတိုးပွားလာမှုန့်ဖြစ်လာရသည်။ ဖုန် မှစ. , တွင်းကနေလမ်းမပေါ်တွင်ကျနော်တို့ရောဂါအများကြီးဆွဲဆောင်ကြသည်။ ဗဟိုလည်းဆုံးရှုံးမှုကိုမြင်လျှင်ထုတ်ကုန်တာအဆိုးဆုံးလမ်းဖြစ်သောများအတွက်ထုတ်ကုန်၏သေတ္တာများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များစျေးကွက်များအတွက်သာကဒီမှာရောက်နေဒါကြောင့်ပါပဲ။ ခင်မှာကျနော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးဆွဲဆောင်ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။ Böğrüeğrအများပြည်သူအဖြစ်Başkanımızတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကတ္တရာသွန်းလောင်းလေ၏။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကာဣနန်သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်စေ့စပ်ဘယ်သူအားမျှမကျူးကျော်ခဲ့ဒီလမျး, 20 နှစ်ပေါင်း "ရောင်းပြီးနောက်ဗဟိုမှလမ်းကြောင်းမီးအတွက်ပျက်စီးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုဆိုသည်။ တစ်ဦးကအပေါ်ယံပိုင်းပြုလေ၏။ ထို့နောက်သူကဆောင်းတွင်းအဘို့ဆင်းချိုးတော်မူ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသွားအလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဆုံးရှုံးဒေသများသို့သလိုပဲ။ အခုဆိုရင်လမ်း Hemant Secor Başkanımız'lနှင့်အတူလုပ်ရမည်စတင်ခဲ့သည်။ လမ်းပျက်စီးခြင်းနှင့်အသီးအပွငွေကိုတန်ဖိုးရှိမဟုတ်သည်ကို ထောက်. ဝယ်လက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းကိုanice လမ်းအတွက်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ် "ဟုသူကပြောခဲ့သည်။
အများဆုံး Bayram Aydin Mukhtar, "ငါတစ်နှစ် 1985 အရောင်းကတည်းကဒီနေရာမှာဖြစ်၏။ သူကဒါဝေးခင်းထားသည်။ ငါကားတစ်မက်မွန်ကို install ခဲ့သည်။ ကရောင်းချခဲ့ဘဲ, မက်မွန်အမှုန့်ရောက်ရှိသည်အထိ Adana သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့လမ်းကြောင်းတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကတ္တရာစွန့်ပစ်။ ဘုရားသခင့ကောင်းကြီးပေးကြလော့။ ထိုနောက်မှအများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံသားများကိုလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါကြောင်း, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းPozantı superstructure ပြုပြင်နုကမ်းလှမ်းမှုကိုဘို့ကောက်ယူခဲ့သည် 24 / 06 / 2014 KGM5။ ဧရိယာ CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - Pozantıအဝေးပြေးကားလမ်းတင်ဒါ၏အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများ၏ bodywork ပြုပြင်5စုဆောင်းခဲ့ကြသည်ကိုဆက်ကပ်။ နုကမ်းလှမ်းမှု၏ဇွန်လအတွက် 10 2014 ရက်ပေါင်းစုဆောင်းခဲ့ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု "- Mersin - - တာရှုမွို့အဆိုပါကားလမ်း၏အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းPozantı superstructure ပြုပြင်အလုပ် CESMS" ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ကုမ္ပဏီများအများ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တင်ဒါပါဝင်ခဲ့အောက်ပါအတိုင်း 85.004.672 ပေါင် (¨) ကမ်းလှမ်း: 1 ။ Akya ပင်လယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး - ဆောက်လုပ်ရေးမင်္ဂလာပါ-K သည် 43.987.8412။ Ayhanlar လမ်းမကြီးအဆောက်အအုံ 48.864.6863။ အစ္စတန်ဘူလ် Asf - Cheka ကွန်ကရစ် 49.242.0954။ Berg ကဆောက်လုပ်ရေး 52.451.941 ...
CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - Pozantıကားလမ်းနူးညံ့ bodywork ပြုပြင်အတွက်ရလဒ် 28 / 08 / 2014 KGM5။ ဧရိယာ CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - Pozantıကားလမ်းနူးညံ့ bodywork ပြုပြင်အဝေးပြေး (KGM)5ခဲ့သည်။ ကောက်ခံအဆိုပြုချက်၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ဇွန်လအတွက် 10 2014 ရက်ပေါင်း "CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - ထိုကားလမ်း၏အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းPozantı superstructure ပြုပြင်အလုပ်" တင်ဒါရလဒ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နု 85.004.672 48.864.686 များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစိတ်ပိုင်းဖြတ်သောသူ Ayhan ပေါင်လေလံလမ်းအဆောက်အဦးအနိုင်ရခဲ့သည် POUNDS ။ နုအနိုင်ရကုမ္ပဏီ၏လိပ်စာ: DOSB3။ Gediz အစိတ်အပိုင်းများ Caddesi အဘယ်သူမျှမ:7Kocaeli လျ: 0262 759 10 22 1186 Ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်း / 16 ဇွန်လ ...
တာရှုမွို့၌မီးရထားလေ့လာရေး 30 / 05 / 2016 တာရှုမွို့လေ့လာမှုကိုယ်စားဖယ်ရှားရေးများအတွက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းတာရှုမွို့၌မီးရထားစစ်ဆင်ရေး, တာရှုမွို့မြို့တော်ဝန် Shaukat နိုငျသညျ, တာရှုမွို့-Adana-Mersin4ပင်ကို double-လမ်းကြောင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအားကဆိုသည်။ သူတို့ဟာနိုင်သလား, စားသောက်ဆိုင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူတို့ကမကြာသေးမီကာလအတွင်းပြုသမျှအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ သူကသူတို့အလင်းရောင်ရင်ပြင်များအတွက်ခရိုင်အတွင်းရှိအလုပ်လုပ်နေစတင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်အတူ sahur နိုင်သလားသူတို့ဿွာန် iftar ညစာ၏လကိုပေး၏ဟုပြောခဲ့သည်။ အဆိုပါ Can addressing Adana-တာရှုမွို့-Mersin မီးရထားလမ်းတိုးချဲ့အစပျိုးဟုပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကဒီစီမံကိနျးကိုဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီစီမံကိနျးကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ချင်ပါတယ်လုပ်သောအခါ, ပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်GazipaþaMithatpaşa, Yesilyurt, Fahrettinpaşနှင့်Kavaklıတန်း ... ။
CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းPozantı superstructure ပြုပြင်နုကမ်းလှမ်းမှုကိုဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်
CESMS - Mersin - တာရှုမွို့ - Pozantıကားလမ်းနူးညံ့ bodywork ပြုပြင်အတွက်ရလဒ်
အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး Kadikoy-Kartal မက်ထရိုမြေအောက်ရထားများ၏သမိုင်းရှိပါသလား?
တာရှုမွို့ 50 နှစ်ပတ်လည်လမ်းခရီးဟာရှည်လျား Done